ကိုမင်းသွေးသစ်ကို စစ်တပ်က လာရောက်ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်နေစဉ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းသွေးသစ်ကို စစ်ဝတ်စုံ ၀တ်ထားသူတွေက လာရောက် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူ မရတနာစုပိုခိုင်က ပြောပါတယ်။ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မရတနာစုပိုခိုင်။ကိုမင်းသွေးသစ်တယောက်ဘဲ အကို၊ ဒီမှာကတော့လေ။ သန်လျင်မှာတော့ သူတယောက်ဘဲ လာခေါ်သွားတယ်။
မေး။အခု သူတို့လာခေါ်တဲ့ပုံစံက ဘယ်လို ပုံစံမျိုးလဲ ညီမ၊ သိရသလောက်ပြောပြပါလား။ ဘယ်လိုပြောပြီး သူတို့ လာခေါ်တာလဲ။
မရတနာစုပိုခိုင်။ ကိုမင်းသွေးသစ် ရှိလားပေါ့နော်၊ သူတို့က မေးတယ်။ ကျမက ညကတည်းက ပြန်မလာဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပြောလိုက်တော့ သူက ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့၊ ဒါဆို ကျနော်တို့ အထဲမှာဝင်ရှာလို့ရလားပေါ့နော်။ အဲဒါနဲ့ ကျမက ရှာဖွေပုံစံပါလားလို့ သူတို့ကိုမေးတော့ သူတို့မလိုဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ခနနေဦး၊ ကျမ ဖုန်းဆက်ပေးမယ်လို့ သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်။ သူတို့က အတင်းဝင်မယ်လုပ်နေတာ။ ကျမ ဖုန်းဆက်ပေးမယ်လို့ ပြောပြီးတော့မှ ကိုမင်းသွေးသစ်ကကျတော့ သူထွက်လိုက်မယ်တဲ့ ပြောတယ်။ သူက သူတို့ကို ထွက်တွေ့တယ်။ သူတို့က ခနပါဘဲတဲ့။ ပစ္စည်းတော့ ထဲ့ပေးလိုက်ပါတဲ့။ သူ့ရဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေတော့ ထဲ့ပေးလိုက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ခနပါဘဲတဲ့။ သူတို့ မေးစရာရှိတာ မေးပြီးရင် ဟ၀ါ. . . ဖြစ်မှာပါလို့ ပြောတယ်။
မေး။ သူတို့ဆိုတာက ညီမရေ စစ်တပ်လား၊ ရဲလား၊ ဘယ်လိုလူတွေလဲ ညီမ ကွဲကွဲပြားပြားသိလိုက်လား။
မရတနာစုပိုခိုင်။ စစ်တပ်ကရှင့်။ အင်္ကျီအပြာဝတ်စုံနဲ့ဆိုတော့ ရေတပ်ကဖြစ်မယ်ရှင့်။
မေး။ ကိုမင်းသွေးသစ်ကအရင် သူ ကျောင်းသားအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်ခဲ့တာတွေမှာ ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်မှုကိုလည်း သူက ကျခံထားပြီးသား။ ဒီရက်ထဲမှာ သူက တခြားအဖမ်းခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့ရော ညီမ သိသလား။
မရတနာစုပိုခိုင်။မရှိဘူးရှင့်၊ မရှိဘူး။ သူတို့လဲပြောတယ်ပေါ့နော်။ သူတို့က ခင်ဗျား ဘာမှလုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ ခနဘဲမေးပြီးတော့ ပြန်လွတ်မှာလို့ ပြောတယ်။ လောလောဆယ် သူ့မှာ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ် မရှိဘူးပေါ့နော်။ အခုချိန်ထိတော့ပေါ့နော်။ သူက သူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအကုန်လုံးက ကျပြီးသားဖြစ်တယ်။ သူက လောလောဆယ်မှာ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ် မရှိဘူး။
မေး။ အဲဒီလောက်ဘဲ ညီမလဲ သိလိုက်ရတယ်လား။
မရတနာစုပိုခိုင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ သူတို့ကိုလဲ မေးလိုက်တယ်။ ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှာလဲမေးတော့၊ သူတို့မှာ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်၊ ပြောလို့မရဘူးလို့လဲ ပြောတယ်။
မေး။ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် လာကြတာလဲ ညီမ။ သူတို့က လက်နက်တွေနဲ့လား။
မရတနာစုပိုခိုင်။ကားမောင်းအပါဆို ၄ ယောက်ပေါ့နော်။ လက်နက်က ၂ ယောက်ပါတယ်။ ၃ ပွင့်နဲ့တယောက်က ဒီအတိုင်းဘဲ စာအုပ်နဲ့လာတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂ ယောက်ကတော့ လက်နက်ပါတယ်။
မေး။ညီမ စောစောက ပြောပုံအရဆို သူတို့က ဖုန်းကြိုဆက်ပြီးတော့ လာတွေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ကြိုပြီးတော့ အသိပေးပြီးတော့ လာတာလား။
မရတနာစုပိုခိုင်။မဟုတ်ဘူးရှင့်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဖုန်းကြိုမဆက်ဘူး။ ကျမတို့ကို တံခါးလာခေါက်တယ်။ ကျမတို့က ရုံးမှာနေတာဆိုတော့ ရုံးက ဒီ (ဓါတ်ဘော်ဒီတွေ) Covid Positive နဲ့သေတဲ့ DB သယ်ဖို့ လာခေါ်တယ်လို့ပဲထင်တာ ဘာတွေ သယ်ရအောင် လာခေါ်တာလားပေါ့နော်၊ ထင်တာ။ ဒါပေမယ့် ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး သူတို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ တံခါးကိုလာခေါက်ပြီးတော့ ခေါ်သွားတာပါ။
မေး။ညီမနဲ့အတူ တခြားလူတွေလည်း ရုံးမှာရှိနေတယ်။ ညီမတို့ ကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့ ဘာမှ မေးခွန်းလည်း မထုတ်ဘူး။ ဘာမှလည်း မပြောဘူးပေါ့နော်။ သူ့တယောက်ထဲကိုဘဲ ရွေးပြီးခေါ်သွားတာ။
ကြောငျးသားသမဂ်ဂခေါငျးဆောငျဟောငျးတဦးဖွဈသူ ကိုမငျးသှေးသဈကို စဈဝတျစုံ ဝတျထားသူတှကေ လာရောကျ ဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားခဲ့ကွောငျး ဇနီးဖွဈသူ မရတနာစုပိုခိုငျက ပွောပါတယျ။ ကိုဇျောဝငျးလှိုငျက ဆကျသှယျ မေးမွနျးထားပါတယျ။
မရတနာစုပိုခိုငျ။ကိုမငျးသှေးသဈတယောကျဘဲ အကို၊ ဒီမှာကတော့လေ။ သနျလငျြမှာတော့ သူတယောကျဘဲ လာချေါသှားတယျ။
မေး။အခု သူတို့လာချေါတဲ့ပုံစံက ဘယျလို ပုံစံမြိုးလဲ ညီမ၊ သိရသလောကျပွောပွပါလား။ ဘယျလိုပွောပွီး သူတို့ လာချေါတာလဲ။
မရတနာစုပိုခိုငျ။ ကိုမငျးသှေးသဈ ရှိလားပေါ့နျော၊ သူတို့က မေးတယျ။ ကမြက ညကတညျးက ပွနျမလာဘူးလို့ ပွောလိုကျတယျ။ ပွောလိုကျတော့ သူက ဘယျလိုပွနျပွောလဲဆိုတော့၊ ဒါဆို ကနြျောတို့ အထဲမှာဝငျရှာလို့ရလားပေါ့နျော။ အဲဒါနဲ့ ကမြက ရှာဖှပေုံစံပါလားလို့ သူတို့ကိုမေးတော့ သူတို့မလိုဘူးလို့ ပွောတယျ။ အဲဒါနဲ့ ခနနဦေး၊ ကမြ ဖုနျးဆကျပေးမယျလို့ သူတို့ကိုပွောလိုကျတယျ။ သူတို့က အတငျးဝငျမယျလုပျနတော။ ကမြ ဖုနျးဆကျပေးမယျလို့ ပွောပွီးတော့မှ ကိုမငျးသှေးသဈကကတြော့ သူထှကျလိုကျမယျတဲ့ ပွောတယျ။ သူက သူတို့ကို ထှကျတှတေ့ယျ။ သူတို့က ခနပါဘဲတဲ့။ ပစ်စညျးတော့ ထဲ့ပေးလိုကျပါတဲ့။ သူ့ရဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှတေော့ ထဲ့ပေးလိုကျပါ၊ ဒါပမေယျ့ ခနပါဘဲတဲ့။ သူတို့ မေးစရာရှိတာ မေးပွီးရငျ ဟဝါ. . . ဖွဈမှာပါလို့ ပွောတယျ။
မေး။ သူတို့ဆိုတာက ညီမရေ စဈတပျလား၊ ရဲလား၊ ဘယျလိုလူတှလေဲ ညီမ ကှဲကှဲပွားပွားသိလိုကျလား။
မရတနာစုပိုခိုငျ။ စဈတပျကရှငျ့။ အင်ျကြီအပွာဝတျစုံနဲ့ဆိုတော့ ရတေပျကဖွဈမယျရှငျ့။
မေး။ ကိုမငျးသှေးသဈကအရငျ သူ ကြောငျးသားအရေးကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ပါဝငျခဲ့တာတှမှော ထိုကျတနျတဲ့ပွဈမှုကိုလညျး သူက ကခြံထားပွီးသား။ ဒီရကျထဲမှာ သူက တခွားအဖမျးခံရနိုငျတဲ့အကွောငျးရှိတယျလို့ရော ညီမ သိသလား။
မရတနာစုပိုခိုငျ။မရှိဘူးရှငျ့၊ မရှိဘူး။ သူတို့လဲပွောတယျပေါ့နျော။ သူတို့က ခငျဗြား ဘာမှလုပျထားတာမဟုတျတဲ့အတှကျ သူတို့ ခနဘဲမေးပွီးတော့ ပွနျလှတျမှာလို့ ပွောတယျ။ လောလောဆယျ သူ့မှာ ပွဈမှု၊ ပွဈဒဏျ မရှိဘူးပေါ့နျော။ အခုခြိနျထိတော့ပေါ့နျော။ သူက သူ့ရဲ့ပွဈဒဏျတှအေကုနျလုံးက ကပြွီးသားဖွဈတယျ။ သူက လောလောဆယျမှာ ပွဈမှု၊ ပွဈဒဏျ မရှိဘူး။
မေး။ အဲဒီလောကျဘဲ ညီမလဲ သိလိုကျရတယျလား။
မရတနာစုပိုခိုငျ။ဟုတျကဲ့ရှငျ့။ သူတို့ကိုလဲ မေးလိုကျတယျ။ ဘယျကိုချေါသှားမှာလဲမေးတော့၊ သူတို့မှာ ပွောပိုငျခှငျ့မရှိဘူးပေါ့နျော၊ ပွောလို့မရဘူးလို့လဲ ပွောတယျ။
မေး။ဘယျနှဈယောကျလောကျ လာကွတာလဲ ညီမ။ သူတို့က လကျနကျတှနေဲ့လား။
မရတနာစုပိုခိုငျ။ကားမောငျးအပါဆို ၄ ယောကျပေါ့နျော။ လကျနကျက ၂ ယောကျပါတယျ။ ၃ ပှငျ့နဲ့တယောကျက ဒီအတိုငျးဘဲ စာအုပျနဲ့လာတယျ။ ကနျြတဲ့ ၂ ယောကျကတော့ လကျနကျပါတယျ။
မေး။ညီမ စောစောက ပွောပုံအရဆို သူတို့က ဖုနျးကွိုဆကျပွီးတော့ လာတှခေ့ငျြတယျဆိုတဲ့ဟာကို ကွိုပွီးတော့ အသိပေးပွီးတော့ လာတာလား။
မရတနာစုပိုခိုငျ။မဟုတျဘူးရှငျ့။ အဲဒီလိုမဟုတျဘူး။ ဖုနျးကွိုမဆကျဘူး။ ကမြတို့ကို တံခါးလာခေါကျတယျ။ ကမြတို့က ရုံးမှာနတောဆိုတော့ ရုံးက ဒီ (ဓါတျဘျောဒီတှေ) Covid Positive နဲ့သတေဲ့ DB သယျဖို့ လာချေါတယျလို့ပဲထငျတာ ဘာတှေ သယျရအောငျ လာချေါတာလားပေါ့နျော၊ ထငျတာ။ ဒါပမေယျ့ ထှကျကွညျ့လိုကျတော့ မဟုတျဘူး သူတို့ဖွဈနတေယျပေါ့နျော။ ဆိုတော့ တံခါးကိုလာခေါကျပွီးတော့ ချေါသှားတာပါ။
မေး။ညီမနဲ့အတူ တခွားလူတှလေညျး ရုံးမှာရှိနတေယျ။ ညီမတို့ ကနျြတဲ့လူတှကေိုတော့ ဘာမှ မေးခှနျးလညျး မထုတျဘူး။ ဘာမှလညျး မပွောဘူးပေါ့နျော။ သူ့တယောကျထဲကိုဘဲ ရှေးပွီးချေါသှားတာ။